ht3t | Waiyan's Blog
Author Archives: ht3t
CORS with AngularJS and Spring REST
Posted on January 22, 2014 by ht3t
Posted in Java	| Tagged angularjs, CORS, restful, spring	|6Comments
Guidline For Learning Spring Framework
Posted on January 15, 2014 by ht3t
၂ဝ၁၃ က ကျွန်တော့်အတွက် ကံကောင်းတဲ့ နှစ်လို့ပြောလို့၇ပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ ကျောင်းတက်ခွင့်၇သလို စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေ လည်း၇လိုက်တယ်။ အစက ကျောင်းက သင်၇ိုးကို သိပ်မကြှိူက်လှဘူး။ platform တွေ အစုံသင်ပေမယ့် project တွေကို သူတို့ ခိုင်းတဲ့ .Net platform ပေါင်္မှာပဲေ၇း၇တာ.. နောက် course တစ်ဝက်ပြီးလို့ internship ဆင်းတော့လည်း မလုပ်ချင်တဲ့ project နဲ့ platform ပေါ်မှာပဲ လုပ်၇တယ်။ ပထမတော့ စိတ်ပျက်တာပေါ့.နောက်တော့လည်း တဖြေးဖြေးနဲ့ အဆင်ပြေလာတာပါပဲ။ .Net platform ကို ဒီကျောင်းမှ စသင်ဖူးပေမယ့် Java အခြေခံ၇ှိတော့ သင်၇တာနဲ့ လေ့လာ၇တာတော့ သိပ်အခက်အခဲ မ၇ှိဘူး။ ၇ုံးမှာလုပ်တော့လည်း google မှာ ၇ှာလိုက် […]
Posted in Java	| Tagged guide, spring, springmvc	| Leaveacomment
Posted on October 29, 2013 by ht3t
When it comes to web page layout, how you place your element on the page without effecting the document flow, you might probably think of CSS position property. But if you are confused how this property works and when to use particular values of this property, here isabrief introduction of CSS position.
Posted in CSS	| Tagged position	| Leaveacomment
Posted on October 25, 2013 by ht3t
Twitter is nice place to announce breaking news inashort and concise manner. If you areablogger and you want your visitors to follow you on twitter, I will show you how to add twitter follow button to your wordpress blog.
Posted in Uncategorized	| Tagged twitter, wordpress	| Leaveacomment
jQuery Animation Part I : Simple Animation
Posted on October 24, 2013 by ht3t
When you want your website to offer visitors full fancy animation when they hover or click something on your website, you can achieve this using jQuery or CSS3. These days, CSS3 animation becomes popular and more flexible to use. It doesn’t delay website performance. But the only limitation is not every browsers haven’t support all […]
Posted in jQuery	| Tagged animation	| Leaveacomment
တနေ့က twitter သုံးနေရင်း user တယောက်က getforge.com ဆိုတဲ့ static hosting site တစ်ခုအကြောင်းကို tweet ထားတယ်။ ဒါနဲ့ အဲ site ကို သွားကြည့်တော့ တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ UX နဲ့ UI ကလည်း တော်တော်လေး simple ဖြစ်တယ်။ Free account ဆိုရင်တော့ site တစ်ခုပဲ host လုပ်လို့ရတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ site ကို zip လုပ်ပြီး upload လုပ်လိုက်ရုံပဲ။ Configuration တွေကို သူဘာသာ manage လုပ်သွားတယ်။ jquery လို library တွေကိုလည်း cdn နဲ့ ထည့်သွားတယ်။ ပြီးတော့ version တွေပါ control လုပ်ပေးတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ version ကို deploy လုပ်ရုံပဲ။ […]
Posted in Hosting	| Tagged getforge	| Leaveacomment
Jquery ToDo List App
Posted on October 18, 2013 by ht3t
Programmer, Blogger and Design Enthusiast.
angularjs animation CORS css3 getforge guide hoisting keyboard learningjs position restful scope spring springmvc static todo twitter wordpress zawgyi